Sergio Ramos oo u Jawaabay Gerard Pique | Wardoon Wardoon.net - Somali News
Sergio Ramos oo u Jawaabay Gerard Pique
Kabtan Sergio Ramos ayaa ka jawaabay hadal kooban oo guushii Real Madrid uu ku duray difaaca Barcelona ee Pique oo bartiisa Twitterka adeegsanaya.
Pique ayaa twitterkiisa ku qoray saddex-dhiibcood oo uu ula jeeday in saddex khalad oo uu garsoorihii ciyaartu u sameeyey Real Madrid, kuwaas oo ahaa laba gool oo offside ah iyo casaan lasiiyey Vidal, hadalkaasna waxa uu ku baahay warbaahinta iyo baraha bulshada oo fasiraad kala duwan ka bixiyey.
Haddaba, Ramos oo ciyaarta kaddib u jawaabay ayaa yidhi: “Dib haysugu noqdo oo ha daawado ciyaartii PSG, hana eego inuu isku si’ u arko garsooraha. Aynu eegno waxa dhaca kulanka labaad ee Juventus” sidaas ayuu yidhi Ramos.
Difaacyahankan goolka labaad iska dhaliyey ciyaartii Munich, waxa uu taageeray in muuqaal caawiya garsooreyaasha lagu soo kordhiyo ciyaaraha, kuwaas oo qayb ka qaadan kara in la yareeyo khaladaadka ka yimaadda garsoorka.